Chelsea oo Heshiis lagashay Massimiliano Allegri – WIDHWIDH ONLINE
Chelsea oo Heshiis lagashay Massimiliano Allegri
Published: January 11, 20183:23 pm
Waxaa soo baxay war lama filaan ah oo sheegaya in maamulka iyo mulkiilaha Chelsea ee Roman Abramovich ay haddaba heshiis la sii gaadheen macalinka kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri si uu badalka tooska ah ee Antonio Conte u noqdo. Mustaqbalka Conte ayaa waqti dheer soo ahaa mid aan sal dhigan waxaana jirta suurtogalnimada uu Conte kaga bixi karo Stamford Bridge.
Wargayska Talyaaniga ka soo baxa ee Corriere dello Sport ayaa war miino oo kale ah ku qarxiyay Stamford Bridge kadib markii uu sheegay in Chelsea ay haddaba heshiis la sii gaadhay Max Allegri si uu Blues uga badalo ninka ay isku Talyaaniga yihiin ee Antonio Conte.
Roman Abramovich ayaa caan ku ah in uu si sahlan tababarayaasha kooxdiisa u badalo inkasta oo Antonio Conte uu xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ku soo guulaystay Premier League isla markaana ay Chelsea wali ku sii jirto tartamada yurub oo markii uu qabtay ay ka maqnayd.
Wargayska Corriere dello Sport ayaa sheegay in Allegri uu haddaba heshiis afka ah la sii gaadhay Roman Abramovich iyo maamulkiisa Stamford Bridge laakiin Juventus ayaa doonaysa in Allegri ay sii haysato ilaa inta uu qandaraaskiisu dhacayo sanadka 2020.
Haddii ay tahay in la rumaysto warka uu daabacay wargayska Talyaaniga ee Corriere dello Sport, tababare Allegri ayaa markale qaban doona koox uu Antonio Conte ka soo shaqeeyay qaab la mid ah sidii Juventus.
Halkan Si Toos Ah Ugala Soco Dhaq Dhaqaaq Kasta Oo Suuqa Kala Iibsiga Bisha January Ka Dhaca -Tabin Qoraal Ah Oo Toos Ah
Published: January 15, 20189:27 pm
Shaxda Rasmiga Ah Ee Barcelona Vs Valencia Iyo Valverde Oo Shax Xoogan Soo Xushay
Published: February 1, 20189:58 pm